I-China Traditional Chinese Medicinal Materials Herba Cistanches Ukukhiqiza kanye nefektri | Bestop
Imithi Yemvelo Engamakhambi
Ukunakekelwa Kwezempilo Kwabesilisa
Itiye le-Organic Herbal
Itiye lembali yobuhle
Ukuhlolwa Kwamaklayenti weGoHerbal
Imbewu Ye-Asiatic Plantain Chinese Herbal Medicine Ngubani ...
Izinto Zendabuko Zokwelapha ZaseChina Herba Cistan ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Clove
I-Chinese Herbal Medicine Wholesale Alpinia Officinarum
Imbewu Yesintu YamaShayina Yemithi Yamakhambi
Traditional Chinese zokwelapha ulwelwesi Of ...
Umdabu Wendabuko WamaShayina Womuthi Wokuloba
Imithi Yemvubelo Yendabuko Yemishanguzo YaseShayina
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Traditional Chinese Medicine Maca
Ikhasi Elisha Elivuniwe LaseKaffir Lime
Izimpahla Zetiyi Lelily Esitokisini
I-Flower Tea URose Bud
Itiye Lembali LeMarigold Eliphilile
I-Wholesale Flower Tea Khohlwa-Mina-Hhayi
Itiye lembali leBurdock
Izimbali Zetiye Le-Peony Esitokisini
Izinto Zokwelashwa Zendabuko ZaseShayina ZaseHerba Cistanches
Igama lesiShayina: da yun
Igama lesiNgisi: herba cistanches
Igama lesiLatin: Cistanche salsa (CAMey.) G.Bec
Sebenzisa Ingxenye: Izimpande
Imininingwane: Yonke, Sika Ucezu, i-Bio Powder, Khipha i-Powder
Ukwenza i-yang yezinso iqonde, okusizakala ngegazi kanye namathumbu okuphumuza
Isicelo: Imithi, Ukunakekelwa Kwezempilo, iwayini, njll.
Isitoreji: Indawo epholile neyomile.
Ukupakisha: 1kg / isikhwama, 20kg / ibhokisi, njengoba ngamunye abathengi isicelo
UDayun, ogama lakhe lesayensi linguCistanche deserticola, ubizwa ngokuthi yi-goblin noma i-golden bamboo shoot ngabasebenzi bemithi baseChina. Ungumuthi wamakhambi obaluleke kakhulu waseChina, futhi waziwa njenge- "desert ginseng". Kubhekwe njengengcebo yenkantolo yentela amazwe asentshonalanga emlandweni, ikakhulukazi asatshalaliswa eXinjiang nase-Inner Mongolia.
I-Cistanche deserticola isitshalo esinciphisayo esinezimpande ze-Haloxylon ammodendron, enezidingo eziphansi enhlabathini nasemanzini. Eminyakeni yamuva nje, kube nentuthuko enkulu ekutshaleni iCistanche deserticola ngokulingisa endle ogwini lomfula olunesihlabathi eCangzhou, esifundazweni saseHebei. Ikhwalithi yeCistanche deserticola ekhiqizwe iphezulu kakhulu ngoba ikhwalithi yenhlabathi ingcono kakhulu kunaleyo yasendaweni eyihlane. IGansu, Qinghai, Xinjiang, Inner Mongolia, Russia, Mongolia ne-Iran.
Ukwenza i-yang yezinso iqonde, okusizakala ngegazi kanye namathumbu okuphumuza. Isicelo: Imithi, Ukunakekelwa Kwezempilo, iwayini, njll.
Ukuya esikhathini okungajwayelekile, i-amenorrhea, ukungabi nenzalo, ukungabi namandla, i-spermatorrhea, umchamo oconsayo, i-aphonia eqhoshayo, ukuqunjelwa, isifo sohudo ngenxa yokushoda kwamakhaza nokugula kwabantu abaningi.
1. Kungcono ukusebenzisa i-Angelica sinensis ngamafutha ukondla igazi nokumanzisa ukoma, ukukhulisa amanzi nokuhamba ngesikebhe, futhi unamandla aqinile e-laxative. Kukulungele ukuqunjelwa kwabantu asebekhulile abane-yang ebuthakathaka kanye ne-essence enganele negazi. 2, neMorinda officinalis, ithuthukisa amandla okufudumeza izinso nokuqinisa i-yang, womabili afanele ukuswakama ukoma, futhi inomphumela omuhle wokugcwalisa umlilo ngaphandle kwamanzi awomile. Ngokushoda kwe-yang yezinso, ukungabi namandla kanye ne-spermatorrhea, okhalweni olubandayo namadolo, amathambo nemisipha ebuthakathaka, njll., Kukhethwa kaningi; Futhi inomsebenzi wokuxhasa i-yang namathumbu aphumuzayo. Uma isetshenziselwa ukwehluleka kwe-senile qi nokuqunjelwa ngenxa yokushoda kwe-yang, isilinganiso se-Cistanche deserticola singakhuphuka ngokufanele, futhi umphumela omuhle wokwelapha ungatholakala. 3. Uma ihlanganiswe ne-Astragalus membranaceus, i-Cistanche deserticola ingathwala amandla aqabulayo e-Astragalus membranaceus iye ezinso, futhi inomphumela wokuthambisa izinso ne-qi nokusiza i-yang yezinso. 4, nge-Achyranthes bidentata, kunezinzuzo ezimbili ezikhethekile. Okokuqala, bayaphelelisana futhi kufanele babhangqwe ukukhulisa amandla okufudumeza izinso nokuqinisa i-yang; Okwesibili, i-Achyranthes bidentata ingaholela umuthi phansi uma ulungile ekuhambeni. 5. Ngemvu yegusha, ingaqinisa i-yin ne-essence. Le mithi emibili, i-yang eyodwa ne-yin eyodwa, iyakhawulelana, iyakhuthazana futhi iyahambisana, futhi inomsebenzi wokulinganisa i-yin ne-yang yezinso.
Ukusetshenziswa kanye nomthamo
I-Dayun ihlukaniswe ngentwasahlobo yasemini nasekwindla i-dayun ngokusho kwesikhathi sokukhetha esihlukile. I-spring dayun iqala ukumba ngo-Ephreli minyaka yonke, iphendukele elangeni elishisayo lasehlobo, bese ipakisha futhi ihambise inyama neziqu ngemuva kokoma; Isikhathi sokumbiwa kukaDayun esikhula ekwindla siqala ngoSepthemba kuya ku-Okthoba. Ubungako bayo buncane kune-Dayun entwasahlobo, kanti nomswakamo wayo ufana nokaDayun entwasahlobo. Kodwa-ke, ngenxa yokukhanya kwelanga okubuthakathaka, ukushisa okuphansi nesikhathi esifushane selanga ekwindla ngasekupheleni nasekuqaleni kobusika, kunzima ukuqinisekisa ikhwalithi nokucaciswa.
(1) ukomisa. Sabalala esihlabathini emini, uqoqe izinqwaba bese uzimboza ebusuku, ukuze uvikele ukubanda ngenxa yomehluko omkhulu wokushisa phakathi kwemini nobusuku. ICistanche deserticola inombala omuhle nekhwalithi ephezulu ngemuva kokumiswa kwelanga.
(2) Ukwenza usawoti. Marinate Cistanche deserticola ngosawoti iminyaka eyi-1 ~ 3, noma umbe umgodi ka-50 × 50 × 120 cm emhlabathini bese uwufaka esikhwameni sepulasitiki esinosayizi ofanayo futhi akukho ukuvuza kwamanzi. Lapho izinga lokushisa lehlela ku-0 ℃, faka i-Cistanche deserticola esikhwameni, sebenzisa usawoti womhlabathi ongacubunguliwe wendawo ukulungiselela u-40% brine wokufaka usawoti, bese uwukhipha bese uwomisa ngoMashi wonyaka wesibili, ngaleyo ndlela ube yiSalty Dayun.
(3) isela. Bamba umgodi ngezansi komugqa obucayi wenhlabathi efriziwe, gqiba iCistanche deserticola entsha esimweni sezulu esibandayo, bese uyikhipha uyomise ngonyaka wesibili.
Gcina endaweni enomoya futhi eyomile ukuvimbela isikhutha nenundu.
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla Of Clove
Olandelayo: Imbewu Ye-Asiatic Plantain Chinese Herbal Medicine Wholesale
Imithi Yemithi YamaShayina
Amakhambi Herbal Platycodon Grandiflorum
Umuthi Wendabuko WamaShayina Wemithi Yamakhambi
Ukulungiswa kwe-Angelica dahurica
Imithi Yesintu YamaShayina Aplotaxis Auriculata
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Rhizoma Cyperi
Ukunakekelwa Kwezempilo Kwabesilisa Cynomorium Songaricum
Imithi Yesintu YamaShayina YesiCinnabar
Imithi Yesintu YesiShayina
Singumqalisi wokusebenza ngamakhambi aseChina asebenzisana ne-esp ngokukhipha umuthi wendabuko emhlabeni wonke.
5 / F, New Land, 92 Qinghe East Road, Qinghe Street, Fuyang Idolobha, Isifundazwe sase-Anhui, China
Siyakwamukela ukuvakashela inkampani yethu
I-Traditional Chinese Medicine Scorpion
Imiphumela emangalisayo yeTangerine Peel